Tsingerintaona faha-21 Antmed
avy amin'ny admin tamin'ny 09-07-21
20 Jolay 2021 no tsingerintaona faha-21 an'i Antmed. Faly izahay fa niroso tamin'ny dingana vaovao tamina herim-po sy asa mafy. Rehefa avy orana sy namirapiratra 21 taona isika dia nanangona voankazo manankarena. Izahay dia manolo-tena amin'ny fananganana marika nasionaly miely amin'ny radiography pression avo lenta ...
Antmed dia nanolotra vola iray tapitrisa ho an'ny asa fanarenana ny tondra-dranon'i Henan
tamin'ny admin tamin'ny 09-01-21
Nanomboka tamin'ny 2021 tamin'ny 17 ka hatramin'ny 21 Jolay, ny faritany Henan dia niaina oram-be nivatravatra ara-tantara. Izy io no oram-be indrindra hatramin'ny 1961. Nitranga tany amin'ny tanàna rehetra any amin'ny faritanin'i Henan izany ary be ny orana any amin'ny faritra avaratra sy afovoany. Ny haavon'ny salanisa farany ambany any Zhengzhou dia 461 ....
Antmed dia manamafy ny ezaka fanaovana vaksiny Covid-19
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 05-11-21
Nanomboka tamin'ny 28 aprily 2021, faritany 31 (faritra mizaka tena sy faritra misy ny governemanta eo ambany fitondran'ny governemanta foibe) sy ny Xinjiang Production and Corps de corps dia nitatitra fa 24 32905.000 dosie vaksinin'ny COVID-19 no natolotra. Mamaly ...
Syringes amin'ny vaksiny 1ml / 3ml / 5ml Luer-Lock COVID-19
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 05-10-21
Ianao ve mila filàna maika syringes vaksinin'ny COVID-19? Sa mila mitahiry vola be ho an'ny tany / faritra misy anao? Antmed, ny marika syringe avo lenta avo lenta any China, dia manolotra eran'izao tontolo izao kalitao avo lenta sy azo antoka 1ml / 3ml / 5ml Luer-Lock ...
Fetin'ny varotra Antmed sy Medica
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 03-23-21
Medica Trade Fair dia fampirantiana malaza eran-tany amin'ny famatsiana ara-pahasalamana. Izy io dia ekena ho fampirantiana hopitaly sy hopitaly lehibe indrindra manerantany miaraka amin'ny ambaratonga sy ny fitaomana tsy azo soloina. Io no vanim-potoana iasan'ny indostrian'ny fitsaboana. Isan-taona, maherin'ny 3.600 ...
Low Dead Space 1mL Vaksinin'ny vaksinim-bokotra Luer-lock Fampidirana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 03-18-21
Tamin'ny taona 2020, noho ny fiparitahan'ny valan'aretina coronavirus vaovao, dia voadona mafy ny ain'ny olona. Olona 7 lavitrisa eran'izao tontolo izao no mila vaksiny hiadiana amin'ilay virus vaovao. Tsy ampy intsony izao ny tsenan'ny vaksininy. Betsaka ny olona tsy afaka mahazo ilay covid vaovao ...
Famokarana masira 1ML / 3ML ambany habakabaka Luer-hidy Syringe famokarana betsaka
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 03-15-21
Shenzhen Antmed Co., Ltd. dia misahana manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy fitaovana fitsaboana efa mandroso ara-teknolojia. Izahay no mpitarika ny tsena anatiny ao amin'ny sehatry ny indostrian'ny transducers tosika avo lenta. Manome vahaolana tokana amin'ny ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 02-26-21
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 02-20-21
Ny syringe Luer-hidy dia be mpampiasa any amin'ireo firenena tandrefana. Any amin'ny ankamaroan'ny firenena an-dàlam-pandrosoana dia malaza kokoa ny syringe luer-slip noho ny vidiny ambany. Ny famolavolana slip kokoa dia toa tsotra - azonao atao ny mampiditra azy io. Saingy tsy momba ny fanamorana izany, fa ny olana ara-pahasalamana lehibe mifandraika amin'ny ...
Famatsiana antmed Covid-19 1ml / 3ml Syringe ho an'ny vaksiny
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 01-28-21
Tags mafana: syringe 1ml, syringe 3ml, syringe azo ampiasaina, fanomanana vaksiny, fandefasana iraisam-pirenena, vaksinin'i Canada, fanjaitra sy syringes, baiko mandemotra ANTMED, amin'ny maha-mpanamboatra syringe avo lenta sinoa antsika, takatray ny andraikitra raisinay ho toy ny iray amin'ireo mpamatsy lehibe ny izaho ...
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 01-21-21
Contrast Media Injector Market 2021 Forecast Ny tsena manerantany ho an'ny mpampiditra tsindry haino aman-jery mifanohitra dia tokony hiakatra hatramin'ny $ 945 tapitrisa amin'ny 2016 ka hatramin'ny $ 2.0 miliara amin'ny 2024, hoy ny orinasa mpikaroka sy mpanadihady, McKesson. Izany dia maneho ny tahan'ny fitomboana isan-taona (CAGR) 12 isan-jato. Ny ...
Fanadihadiana momba ny politika momba ny fividianana vidin'ny sinoa 2020
Fanadihadiana momba ny politika momba ny fividianana vokatra miorina amin'ny volan'ny Sinoa 2020 Ny governemanta sinoa dia nanakodia ny fandaharam-pianarana fanafody avo lenta sy fividianana zava-mahadomelina tamin'ny taon-dasa ary nanitatra izany tamin'ity taona ity. Ity andrana ity dia mampiakatra ny fahefan'ny fifampiraharahana amin'ny vidin'ny governemanta amin'ireo mpamokatra fitaovana mahadomelina sy fanafody ...